သနပ်ခါးများ မပုပ်မသိုးစေရန်အတွက် ထည့်သွင်းသော ဖော်မလင်ဓာတ်ကြောင့် ရေရှည်တွင် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » သနပ်ခါးများ မပုပ်မသိုးစေရန်အတွက် ထည့်သွင်းသော ဖော်မလင်ဓာတ်ကြောင့် ရေရှည်တွင် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
သနပ်ခါးများ မပုပ်မသိုးစေရန်အတွက် ထည့်သွင်းသော ဖော်မလင်ဓာတ်ကြောင့် ရေရှည်တွင် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
“နှစ်ပေါင်းများစွာ သုံးစွဲလာလို့ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သနပ်ခါးအရည်ဘူးတိုင်း၊ သနပ်ခါးအနှစ်ဘူးတိုင်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ် ပါဘူး။ ဖော်မလင်ဓာတ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ သနပ်ခါးအရည်၊ အနှစ်တွေကိုပြော တာပါ”ဟု ယင်းကပြောကြားသည်။
“အခုခေတ်မှာတော့ တာရှည်ခံ ပစ္စည်းတွေက တော်တော်လေးခေတ်မီ လာပါပြီ။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေဆို ရင် အရေပြားကိုမထိခိုက်တဲ့ တာရှည်ခံ ပစ္စည်းတွေကို သုံးလာကြပါပြီ။ ဟိုးအရင်ခေတ်တုန်းကတော့ ဘာမှ သုံးစရာ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဖော်မလင် ကိုသုံးခဲ့ကြတာရှိရင်ရှိမယ်။ အခု ခေတ်လည်း မသုံးဘူး လို့တော့ အပြတ် ငြင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဟိုးတလော က နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် ဂျပန် အလှကုန်တစ်မျိုးတောင် အသားဖြူ ကရင်တစ်ခုမှာ သုံးစွဲရန် မသင့်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းပါတယ်လို့ အသံထွက် ခဲ့ သေးတာပဲ။ အဲဒီတုန်း ကတော့ သုံးစွဲ သူရဲ့ အသားအရေနဲ့ ဓာတ်မတည့် လို့ဖြစ်တာပါ။ လူတိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး လို့ ပြန်လည် ဖြေရှင်းတာကို ကြားရတယ်။
အခု သနပ်ခါးကိစ္စမှာတော့ အစားအသောက် နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး
ဦးစီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ထုတ်လုပ် ရောင်းချတဲ့ သနပ်ခါးအရည်ဘူး၊ အနှစ် ဘူးတွေ ဆိုရင် အန္တရာယ် ကင်းမယ် လို့ထင်ပါတယ်”ဟု ယင်းကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းချလျက် ရှိသော သနပ်ခါး၊ အရည်အနှစ်ဘူး များကို အစားအသောက်နှင့် ဆေး ၀ါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ အလှကုန် ဌာနခွဲ၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့်သာ ရောင်း ချစေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သနပ်ခါး အရည်ဘူး၊ အနှစ်ဘူး များကို ၀ယ်ယူ သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ် ပွားနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း အစား အသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန၊ အလှကုန်ဌာနခွဲမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကလည်း ပြောသည်။
“သနပ်ခါးအရည်ဘူး၊ အနှစ်ဘူး တွေကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ဒီနေ့ အထိတော့ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် တယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှမတွေ့ရသေး ပါဘူး”ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါဌာနသို့ လာရောက်မှတ် ပုံတင်ထားသည့် သနပ်ခါးအရည်ဘူး၊ သနပ်ခါး အနှစ်ဘူးများ၏ အရေအတွက်မှာ အလွန်များပြားသော်လည်း ရာဂဏန်း မကျော်သေးကြောင်း ဒေါက်တာသဇင်ရီလှိုင်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သနပ်ခါးကို အလွန်တရာမှ လူကြိုက်များပြီး အချို့ သော သူများက သနပ်ခါးအတုံးများကို သွေးလိမ်းခြင်းများပြုသကဲ့သို့ အချို့သော သူများက လျှင်မြန်လွယ် ကူစွာဖြင့် လိမ်းခြယ်နိုင်မည့် သနပ်ခါးအခဲ၊ အရည်နှင့် အနှစ်များကို လိမ်း ခြယ်ကြကြောင်း သိရသည်။
အခွို့သော သနပခြါးအရညဘြူး၊ အနှစဘြူးမွားထဲမှ သနပခြါးမွား မပုပြ မသိုးစရနေအြတှကြ ထညြ့သှငြး သော ဖောမြလငဓြာတကြှောငြ့ ရရှညေတြှငြ အရပှေား ကငဆြာအထိ ဖှစပြှားနိုငြ ကှောငြး အရပှေား အထူးကု ဆရာဝနြ ကှီးတစြဦးက ပှောကှားသညြ။
“နှစပြေါငြးမွားစှာ သုံးစှဲလာလို့ အရပှေားကငဆြာဖှစနြိုငတြယဆြိုတာ သနပခြါးအရညဘြူးတိုငြး၊ သနပခြါးအနှစဘြူးတိုငြးကို ဆိုလိုတာမဟုတြ ပါဘူး။ ဖောမြလငဓြာတပြါဝငနြိုငတြဲ့ သနပခြါးအရညြ၊ အနှစတြှကေိုပှော တာပါ”ဟု ယငြးကပှောကှားသညြ။
“အခုခတမြှောတော့ တာရှညခြံ ပဈစညြးတှကေ တောတြောလြေးခတမြေီ လာပါပှီ။ အလှကုနပြဈစညြးတှဆေို ရငြ အရပှေားကိုမထိခိုကတြဲ့ တာရှညခြံ ပဈစညြးတှကေို သုံးလာကှပါပှီ။ ဟိုးအရငခြတတြေုနြးကတော့ ဘာမှ သုံးစရာ မရှိတဲ့ အခွိနမြှာ ဖောမြလငြ ကိုသုံးခဲ့ကှတာရှိရငရြှိမယြ။ အခု ခတလြေညြး မသုံးဘူး လို့တော့ အပှတြ ငှငြးတာမဟုတပြါဘူး။
ဟိုးတလော က နာမညကြှီး အမှတတြံဆိပြ ဂပွနြ အလှကုနတြစမြွိုးတောငြ အသားဖှူ ကရငတြစခြုမှာ သုံးစှဲရနြ မသငြ့တဲ့ ဓာတပြဈစညြးပါတယလြို့ အသံထှကြ ခဲ့ သေးတာပဲ။ အဲဒီတုနြး ကတော့ သုံးစှဲ သူရဲ့ အသားအရနေဲ့ ဓာတမြတညြ့ လို့ဖှစတြာပါ။ လူတိုငြးနဲ့ အဆငမြပှေ ဖှစတြာမဟုတပြါဘူး လို့ ပှနလြညြ ဖှရှငြေးတာကို ကှားရတယြ။
အခု သနပခြါးကိဈစမှာတော့ အစားအသောကြ နဲ့ ဆေးဝါးကှပကြဲရေး
ဦးစီးဌာနရဲ့ လမြးညှနခြကွအြတိုငြး ထုတလြုပြ ရောငြးခတွဲ့ သနပခြါးအရညဘြူး၊ အနှစြ ဘူးတှေ ဆိုရငြ အနျတရာယြ ကငြးမယြ လို့ထငပြါတယြ”ဟု ယငြးကဆိုသညြ။
မှနမြာနိုငငြံတှငြ ရောငြးခလွကြွ ရှိသော သနပခြါး၊ အရညအြနှစဘြူး မွားကို အစားအသောကနြှငြ့ ဆေး ၀ါးကှပကြဲရေးဦးစီးဌာန၊ အလှကုနြ ဌာနခှဲ၏ ခှငြ့ပှု ခကွဖြှငြ့သာ ရောငြး ခစွခှငြေးဖှစပြှီး အဆိုပါ သနပခြါး အရညဘြူး၊ အနှစဘြူး မွားကို ဝယယြူ သုံးစှဲခှငြးအားဖှငြ့ ဘေးအနျတရာယြ ဖှစြ ပှားနိုငခြှငြး မရှိကှောငြး အစား အသောကနြှငြ့ ဆေးဝါးကှပကြဲရေး ဦးစီးဌာန၊ အလှကုနဌြာနခှဲမှ ဒုတိယ ညှနကြှားရေးမှူးဖှစသြူကလညြး ပှောသညြ။
“သနပခြါးအရညဘြူး၊ အနှစဘြူး တှကေို ဓာတခြှဲစစဆြေးတဲ့အခါမှာ ဒီနေ့ အထိတော့ ဘေးအနျတရာယဖြှစြ တယဆြိုတာ တစခြါမှမတှရေ့သေး ပါဘူး”ဟု ယငြးက ဆိုသညြ။
အဆိုပါဌာနသို့ လာရောကမြှတြ ပုံတငထြားသညြ့ သနပခြါးအရညဘြူး၊ သနပခြါး အနှစဘြူးမွား၏ အရအတှေကမြှာ အလှနမြွားပှားသောလြညြး ရာဂဏနြး မကွောသြေးကှောငြး ဒေါကတြာသဇငရြီလှိုငကြ ဆကလြကြ ပှောကှားသညြ။
မှနမြာနိုငငြံတှငြ သနပခြါးကို အလှနတြရာမှ လူကှိုကမြွားပှီး အခွို့ သော သူမွားက သနပခြါးအတုံးမွားကို သှေးလိမြးခှငြးမွားပှုသကဲ့သို့ အခွို့သော သူမွားက လွှငမြှနလြှယြ ကူစှာဖှငြ့ လိမြးခှယနြိုငမြညြ့ သနပခြါးအခဲ၊ အရညနြှငြ့ အနှစမြွားကို လိမြး ခှယကြှကှောငြး သိရသညြ။